China Car Parts emepụta na suppliers | Xuanyi
Nke a metụtara ọrụ pụrụ iche nke ntụ ntụ, dị ka njupụta, porosity, ihe na usoro ọgwụgwọ ọkụ nke ngwongwo ntụ ntụ na-emetụta isi ike na ike.High njupụta na-ezo aka na ngwongwo alloy nke nnukwu ike, obere pores, oke njupụta, mma ihe onwunwe, elu hardness.Heat ọgwụgwọ ụzọ n'ozuzu na-agụnye carburizing quenching, carbonitriding, elu ugboro quenching, ala ugboro quenching, mmanụ quenching, wdg Ntọala na ruru eru quenching usoro na-eme ekweghị ekwe nke okpomọkụ ọgwụgwọ anụ.
N'ihi ịrụ ọrụ dị elu na ọnụ ala nke ihe eji eme ọla ntụ, a na-ejikarị ngwa ngwa na-arụ ọrụ n'ime ụgbọ ala, gụnyere akụkụ ndị na-awụ akpata oyi n'ahụ, nduzi, piston na oche oche dị ala na chassis ụgbọala; Usoro breeki nwere ihe mmetụta ABS, breeki na ihe ndị ọzọ; Mgbapụta akụkụ bụ tumadi mmanụ mgbapụta, mmanụ mgbapụta na nnyefe mgbapụta na isi akụkụ; The engine nwere a conduit, oche mgbanaka, ejikọta mkpanaka, agba oche, isi mmiri nke agbanwe valvụ usoro iheomume usoro (VVT) na iyuzucha ọkpọkọ support, wdg The nnyefe nwere synchronous ehiwe na Na gia etiti na n'akụkụ ndị ọzọ.
I. Mmepe nke ntụ ntụ metallurgy akpaaka akụkụ
Site na ngwangwa mmepe nke ụlọ ọrụ ụgbọ ala China, akụkụ akụkụ akpaaka na-echekwa ngwa ngwa. Na 2015, mmepụta akpaaka nke China ruru nkeji 24,5033, na-ebute ụzọ na ụwa.China's auto parts n'ichepụta ụlọ ọrụ nwetara ahịa revenue nke 3,23 puku ijeri yuan, ihe dị ka pasent 10 site na afọ gara aga. N'aka nke ọzọ, mgbe China batara n'òtù ahia ụwa, ọ bụghị nanị na-etolite ọnụ ọgụgụ zuru oke nke ụlọ ọrụ ụgbọ ala ofesi dịka ndị ọbịa, yana na nnukwu iwu ụlọ ntụ ntụ, ngwaahịa ọ bụla, na ụlọ ọrụ ndị ọbịa si mba ofesi na-etinye ego na mba anyị, iji mepụta ngwongwo ngwongwo ngwongwo zuru oke nke ngwaahịa na-enye obodo nke mkpa na-eto eto, ọchịchọ maka ịgbasa na mmepe nke ụlọ ọrụ na-arụ ọrụ ntụ na China emeela ka ọ bụrụ obere ohere.
Site na echiche nke ahịa mmepụta uru nke ntụ metallurgy akpaaka akụkụ, ahịa mmepụta uru mụbara si 876.21 nde yuan na 2006 na 367.826 nde yuan na 2015, na a compound kwa afọ uto nke 17.28%, ma nọgidere na-enwe a na-emekarị nke na-aga n'ihu ngwa ngwa uto , na ntụ ntụ metallurgy akụkụ akụrụngwa ahịa na-akwado usoro nke uto ngwa ngwa.
Ike nchịkwa nke ngwaahịa ntụ ntụ ntụ ntụ n'oge ọgwụgwọ ọkụ
Njupụta nke ntụpọ atom atom (gụnyere carbon nchara na ọla kọpa-carbon alloy steel) dị n'elu 6.9, na ike ikpochapu ọkụ nwere ike ịchịkwa gburugburu HRC30.
N'ozuzu, njupụta nke ntụ ntụ (AB ntụ ntụ) karịrị 6.95, na ike ikpochapu ọkụ nwere ike ịchịkwa gburugburu HRC35.
A na-ahụkarị ntụ dị elu karịa 6.95 ma na-eme ka ike gwụ ya na HRC40.
Powder metallurgy ngwaahịa mere nke dị n'elu ihe nwere anụ njupụta na ihe onwunwe, na ekweghị ekwe mgbe okpomọkụ ọgwụgwọ na-ezute ndị kwekọrọ ekwekọ chọrọ, ya mere ha ike ọdụdọ na compressive ike ga-eru a mma elu.
Nwere ike ikpo ọkụ nke ọkụ ọkụ nke ọla ntụ ruru 45 nchara? N'ezie ị nwere ike!
Otú ọ dị, n'ihi na njupụta nke ngwaahịa PM adịghị elu dị ka nke nke nchara 45, njupụta kachasị elu nke PM na-agbanye akụkụ na-abụkarị 7.2 g / cm, ebe njupụta nke nọmba 45 bụ 7.9 g / cm. nke ntụ ntụ metallurgy ma ọ bụ usoro ọgwụgwọ ọkụ dị elu karịa HRC45 ga-eme ka ngwaahịa metallurgy mebie n'ihi nnukwu quenching, na-ebute ike nke ngwaahịa metallurgy ntụ.
Ọzọ, anyị ga-atụnyere ngwongwo P / M na-arụ ọrụ nke hobbing.
1. Ọdịdị dị elu nke ihe eji arụ ọrụ, ihe karịrị 95%
2. Mba ma obu nani obere igbue a choro
3. Ezigbo nhazi akụkụ nke akụkụ, ezi nkwụsi ike na oke nkenke.
4. Nkọwa nke ike: ndị na-emepụta ọgwụ ntụ ntụ ọkachamara nwere ike imepụta ihe eji emepụta ntụ ntụ, yana ike mgbatị na ike mkpakọ nke gia mepụtara dị nso na nke hobbing gear. Dịka ọmụmaatụ, akụrụngwa ụgbọala nke gearbox na nnukwu nnyefe ike bụ uzuzu metallurgy gear.Visible, ntụ ntụ metallurgy gia bụ ihe bara uru ma baa ụba.
5. Powder ịpị ịkpụzi iji ebu ịkpụzi, nwere ike na-emepụta ndị ọzọ ọnwụ hobbing technology ike mepụta mgbagwoju shapes.
6. N'ihi na ọ dabara adaba maka imepụta oke igwe, nrụpụta nrụpụta dị elu yana ọnụ ahịa dị ala karịa ịcha.
7. Kwesịrị ekwesị maka ịmepụta ọtụtụ ihe, yabụ ọnụahịa na-asọmpi.
Nke gara aga: Powder Metallurgy Stainless Steel
Osote: Ntụ ntụ Metallurgy Structural Parts
Ntụ ntụ Metallurgy
Ntụ ntụ Metallurgy Materials
Ntụ ntụ Metallurgy Parts
Ntụ ntụ Metallurgy Pinion
Ingpị ntụ ntụ Metallurgy Parts
Sintering Na ntụ ntụ Metallurgy
Igwe anaghị agba nchara ntụ ntụ Metallurgy Auto Parts
Igwe anaghị agba nchara ntụ ntụ Metallurgy Parts